सभापति देउवालाई असफल बनाउने शीर्ष नेताहरुको यस्तो रणनीति ! – आफ्नो प्रेरक संसार
सभापति देउवालाई असफल बनाउने शीर्ष नेताहरुको यस्तो रणनीति !
Bibas chetan — ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:३६0comment
हेटौंडा । असार ५ देखि तीन दिन हेटौंडामा हुने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको पछिल्लो हारको कारक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै बनाएर उनलाई असफल बनाउने रणनीति तयार पार्न शीर्ष नेताहरु लागेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।
समाचारका अनुसार उनीहरुले यस विषयमा आन्तरिक लविङ नै सुरु गरेका छन् । पार्टीको पछिल्लो अवस्थाको कारक संस्थापन पक्षलाई बनाएर देउवालाई असफल बनाउने नेताहरुको आन्तरिक योजना रहेको बुझिएको छ । वैशाख १६ गते भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावी समीक्षालगायत विषयमा छलफल गर्न जिल्ला सभापतिहरुको भेला हेटौंडामा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि पार्टी नेतृत्व गरिरहेका देउवाको समूह, पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रामचन्द्र पौडेलको समूह र पार्टीमा युवा नेतृत्व हुनुपर्ने आवाज उठाउने गगन थापाको समूह सक्रिय छन् । ती समूहहरुबीच आन्तरिक रणनीति बुनिएको नेताहरुको भनाइ छ । लामो समयदेखि जिल्ला सभापति तथा महासमिति बैठक हुन नसकेको भन्दै पार्टी सभापति देउवालाई पौडेल र थापा समूहले आलोचना गरेपछि भेला हुने भएको छ ।
जिल्ला सभापति भेलाको समय तोकिएपछि पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट समूहहरुको सक्रियता बढेको पाइएको छ । निर्वाचनमा बेहोरिएको पराजय, कमजोर पार्टी संरचना र नीतिगत विषयलाई उठाउँदै संस्थापन पक्षलाई थप घेराबन्दीमा पार्ने रणनीतिमा पौडेल पक्ष जुटेको छ ।
विपि काेइरालाका २० उत्कृष्ट भनाइहरू
अब्राहम लिंकनका जिवन उपयोगी भनाइहरू
दु:ख र तनावबाट मुक्त हुन याे पढ्नुस्
मनछुने प्रेमिल भनाइहरू
उत्प्रेरक महान भनाईहरू
एक पुरुषले प्रेम गर्छ तब सर्वस्व दिँदैन तर जब महिलाले प्रेम गर्छिन त सर्वस्व सुम्पन्छिन्
पढेकाे नबिर्सन अर्पण शर्माका यी टिप्स‍्हरू पढ्नुस्
महर्षि वाल्मीकिका राम्रा भनाइहरू